Ihe omuma nke oma na URLitor - Nnukwu ihe ntanetiri Web & Data Extraction Tool
URLitor bụ ihe ntanetị weebụ na ihe nhọta data. Iji jiri URLitor, ị ga-achọ ịtinye ndepụta nke URL niile nke ọdịnaya ịchọrọ iwepụ na ntanetị n'ime template nyere. Mgbe ahụ, ị ​​ga-ezipụta ihe HTML nke ịchọrọ wepụ si webpages wee pịa bọtịnụ ntinye. Ọ dị mfe dị ka nke ahụ. Site na ngwá ọrụ a, ịkwesighi ịmepụta ma ọ bụ madopụ ihe nchọgharị ahụ ọzọ - acquisto di un dominio.
xPath bụ asụsụ eji eji chọọ ozi na faịlụ XML. Ọ na-eji ụfọdụ okwu họrọ ụdị nhazi ma ọ bụ ọnụ na faịlụ XML. Okwu ndị XPath ghọtara dị nnọọ ka ndị eji eji faịlụ kọmputa ma ọ bụ akwụkwọ.
Ọ bụ ezie na a na-eji XPath na ọtụtụ asụsụ mmemme, a rụpụtara ngwá ọrụ a maka ndị ọrụ na-enweghị ihe ọmụma ọ bụla. Ya mere, ịkwesighi ịbụ onye mmemme iji mee ya. Site na ngwá ọrụ a, ị nwere ike wepụ data site na ọtụtụ HTML na XML peeji nke.
Maka iji ihe dị mfe, a na-ahọpụta ọtụtụ okwu ugboro ugboro na mkpụrụedemede menu na XPath ka ndị ọrụ wee nwee ike ịhọrọ nke ọ bụla n'ime ha dabere na ebumnuche ha. Otú ọ dị, ndị ọkachamara nke XPath nwere ikike iji okwu omenala ha mgbe ọ bụla ha chọrọ..
Ejiri ngwá ọrụ nke 100 URL na otu nnọkọ nchịkọta, ọ na-ewe ihe karịrị 10 okwu n'otu oge. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ nwere ike iwepu data site na 100 URLs n'otu oge.
Ụfọdụ ederede omenala XPath nke a pụrụ ịgbanwe ma ọ bụ gbakwunye e depụtara n'okpuru ebe a:
1. // div  - Okwu a na-ahọpụta nhazi nke abụọ;
2. // link [@ rel = 'canonical'] / @ href - Okwu a na-ahọrọ ọnọdụ (ref) nke mkpado ahụ a na-eji mee ka ihe a na-ekwu na ọ bụ kwekọrọ ekwekọ;
3. / html / head / meta [@ name = 'description'] / @ content - A na-eji okwu a maka ịhọrọ ọdịnaya;
4. // * [@ class = 'class-name'] - Ị nwere ike iji okwu a họrọ ihe niile dị na 'klas-aha' dị ka Klas CSS;
5. // h2 | // aha - A pụrụ iji okwu a họrọ ma H2 mbụ na aha aha;
= 'h1' or name
= 'title'] - Okwu a na-arụ ọrụ dịka nke dị n'elu. Otú ọ dị, okwu ahụ dị n'elu dị mma karịa na ọ bụ mkpụmkpụ;
7. // * [nwere (@class, 'mkpịsị aka')] - Okwu a na-ahọpụta ihe ọ bụla nwere CSS ma nwee 'mkpịsị aka' maka mmịpụta;
8. / nne na nna :: * [ederede
= 'Welcome'] - Okwu a na-ahọrọ nne na nna nke ihe ọ bụla nwere ederede 'Welcome ';
Ngwaọrụ a bụ nseta Beta ma nwee ike iji ọrụ ụfọdụ rụọ ọrụ. Otú ọ dị, ọ ka bụ ngwá ọrụ dị ukwuu nke ndị ọrụ nwere obere ihe ma ọ bụ enweghị usoro ihe ọmụma dị ka okwu niile a na-emekarị na-emepụta na menu dị ka ekwuru na mbụ.